नेपालमा भएको संसद विघटनबारे भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दियो ? — Imandarmedia.com
नेपालमा भएको संसद विघटनबारे भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दियो ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेका छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रायजसो छिट्टै प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम यस पटक तुलनात्मक रुपमा मौन छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने कदमप्रति खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालीरहेका ती विज्ञले भने, ‘भित्री रुपमा भने भारतले नेपाललाई सर्वाेच्च अदालतले जे फैसला लिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिने छ ।’ उनका अनुसार विपक्षी दल, नागरिक समाज र मिडियाको पनि एक तप्का विरोधमा रहेकाले भारतले ओलीको कदमलाई सार्वजनिक रुपमा समर्थन गर्ने छैन ।
यस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । शनिबार अपरान्ह नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पक्षमा उभिएका बहुमत सांसदहरु अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हुन् । यसका लागि केहीबेरमा विपक्षी दलका नेताहरु सिंहदरबारमा भेला हुन लागेको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।
उनकाअनुसार आजै सम्भवत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिइने छ । काँग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजनमा कानुनविद्हरु शनिबारदेखि नै आवश्यक कागजपत्र तयार पार्ने काम जारी छ ।
लेखकले भने, ‘हामी हिजोदेखि आवश्यक कागजपत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सकेसम्म आजै सर्वोच्च जान्छौं।’ उपत्यका बाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको विपक्षी गठबन्धनले सांसदहरूलाई नागरिकता लिएर आउन समेत भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेकाले सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास छ । शनिबार नयाँ बानेश्वर संसद भवनमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध​ न्यायिक र राजनीतिक लडाइ लड्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गरेपछि संविधानको धारा ७ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टाको समयभित्रै काँग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको बहुमत जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । सोही समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफूसँग १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा देखाएर सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । बहुमतको सरकार बन्ने आधार नदेखेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओली र देउवाको दाबी खारेज गरिदिइन् ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई विपक्षी गठबन्धनले अस्वीकार गरेको छ ।
अलग्गै पार्टी बनाउने माधव नेपालको तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिएपछि नेकपा (एमाले) भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ । माधव नेपाल समूहले संसद् विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
यी घटनाक्रमसँगै पार्टी पुन: लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । ‘ओलीजीको प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँमा जाने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय नै छ । हाम्रो आज (शनिबार) पनि बैठक बसेको थियो, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामाथि ओलीजीले नै एकपछि अर्को प्रहार गर्न थालेको भन्दै उनले अगाडि थाले-‘ हामीले त जोगाउन सक्दो प्रयत्न गरेकै हो नि । उहाँले असंवैधानिक कदम चालेपछि हाम्रो उपाय लागेन । प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्र जोगाउन हामी फेरि पनि लागेका छौं । जो लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभा जोगाउन लाग्छ, उसैले कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउने हो ।
लोकतन्त्र जोगाए मात्र न कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको उपादेयता रहने हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र परिवर्तनविरुद्धमा, विदेशी दासताको पक्षमा, विदेशीले लगाएको काममा लागेपछि त कसरी प्रतिनिधिसभा जोगिन्छ ?’
उता जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजेन्द्र महतोका संसदीय दलको नेताको पद खारेज गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ दिने सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अध्यक्षतामा शनिवार साँझ बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राइनले बताए ।
पार्टीको विधानविपरीत फर्जी तरिकाले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले महतोलाई संसदीय दलमा चयन गरेको भन्दै बैठकले उनको पदलाई खारेज गरेको हो । यसअघि अध्यक्षद्वय ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच भएको छलफलमा पनि राजेन्द्र महतोको सो पदलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर अध्यक्ष ठाकुरले अझै त्यसलाई निरन्तरता दिएकोप्रति बैठकमा आपत्ति जनाइएको थियो । बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता महतोले पार्टीको निर्णयविपरित काम गरेको कारण स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमलाई समर्थन गर्दै गठन गरिएको कार्यदलमा बसेको कारण लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ओलीकौ प्रतिगमन कदम चाल्न साथ दिने जसपा नेपालका सांसदहरुलाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको कदमलाई प्रतिगामी कदम ठहर गर्दै आपत्ति जनााएको छ । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको र त्यसलाई आजको बैठकले घोर निन्दा गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कदमको विरुद्धमा आज पाँच दलले गरेको निर्णय र जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति जसपा नेपालको बैठकले समर्थन जनाएको उनले पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमको कानुनी उपचार खोज्ने तथा संघर्ष गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।
यो बैठक महन्थ ठाकुरको पनि हस्ताक्षरबाट बोलाइएको बताउँदै कार्यकारिणी समितिको शनिबारको बैठक आधिकारिक बैठक भएको यादवले दाबी गरे । ‘बैठकमा आउनलाई सबैलाई खबर पनि गरिएको थियो । तर वहाँहरु नआएपनि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा अनुशासनहीन काम गरेकालाई पार्टीको विधान अनुसार कारवाही हुनेछ ।’
यता ओलीले फेरी संसद बिघटन गरेपछि नेपाली काँग्रेस फेरिएको छ । शुरुकै दिनदेखि काँग्रेस आक्रामक देखिएको छ र वामपन्थी दलहरुसँग उसले मोर्चाबन्दी कसेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक आक्रामकरुपमा ओलीको कदमविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित ‘प्रतिगमन भाग–२’ ले मुलुक तरंगित छ । कोरोनाको महामारी चरम विन्दुमा रहेकै बेला शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुले अदालत र सडक दुबै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने संयुक्त निर्णय गरेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि शुक्रबार पेसको दाबी खारेज गरेर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निर्वाचनतिर केपी ओलीको योजनालाई सघाएकी छिन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ ।
किनभने ५ पुसमा संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत थियो त्यसैले उनी वैधानिक थिए । वैधानिक प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेका थिए । तर, ७ जेठमा प्रधानमन्त्री आफैं अवैधानिक भइसकेका थिए र अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
५ पुसमा संसद विघटन हुँदा काँग्रेस नेताहरुमा संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा दुई लाइन देखिएको थियो । संसद विघटनबारे पार्टीको औपचारिक निर्णय एउटै भए पनि त्यसबेला काँग्रेसको शीर्षतहमा मत बाझिएको थियो । काँग्रेस सभापति देउवा नै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर नआएको अवस्था थियो ।
देउवाको गतिविधि संसद पुनःस्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनमुखी थियो । त्यतिबेला काँग्रेसले ‘फेससेभिङ’का लागि मात्रै राजनीतिक लडाइँ थालेको जस्तो देखिन्थ्यो । र, त्यसले पार्टी कार्यकर्ताको तल्लो पंक्तिसम्मै अलमल थियो ।
संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल, जसपा र जनमोर्चा, विवेकशील साझाले काँग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनका लागि ईच्छा व्यक्त गरे पनि काँग्रेस त्यसका लागि तयार भएको थिएन ।
काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको दबावका बावजुद पनि देउवा संयुक्त आन्दोलनका लागि राजी नभएपछि ५ पुसबाट ११ फागुनसम्म उनीहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेको अवस्था थियो ।
तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसद फेरि भंग गरिएपछि भने काँग्रेस फ्रन्टलाइनमा आएको छ । ५ पुसमा संसद विघटन हुँदा निर्वाचनतिर जानुपर्ने विषयमा वकालत गर्ने सभापति देउवाका ‘ब्रेन’ मानिने रमेश लेखकका अनुसार यतिबेला काँग्रेस अलमलमा छैन ।
‘पुस ५ मा संसद विघटन हुँदा चुनावमा जाने कि संसद पुनःस्थापनामा जाने भन्नेमा अलमल थियो । यतिबेला संसद पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्न काँग्रेस सम्पूर्ण रुपमा तयार छ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि संसद पुनस्र्थापनाका एजेण्डामा पार्टीलाई डोर्याउन निकै संघर्ष गरेका रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सिंगो पार्टीको मिसन एउटै छ ।
काँग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार यसपटक पार्टी पंक्ति सम्पूर्ण रुपमा एक ढिक्का छ, कुनै अलमल छैन । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको र पार्टी नेतृत्वलाई अपमानित गरिएकोमा काँग्रेसजनमा आक्रोश छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संगठित असंवैधानिक कदम बढ्दै जान्छ भन्नेमा काँग्रेसभित्र बुझाइमा प्रष्टता छ । अब यसविरुद्ध लड्ने हो भन्ने जोस र होस दुबै छ ।’
सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनका १४९ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका काँग्रेस सभापति देउवा ओली विरुद्धका लडाइमा पनि बलियो साथ पाउने परिस्थिति बनेको छ ।जेठ ७ को कदमविरुद्ध सुरुमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका आफ्नो मत राखेका पाँचवटै शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
शुक्रबार राति संसद विघटन भएपछि शनिबार विहानैदेखि त्यसविरुद्ध न्यायिक तथा राजनीति लडाइका लागि विपक्षी गठबन्धन एक स्वरका साथ मैदानमा आएको छ । काँग्रेलले शनिबार बिहान आन्तरिक छलफल गर्यो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीति लडाइँ लड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । काँग्रेसको उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहमति जनाएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पाँचवटा दल र समूहबीच छलफल भई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध उभिने सहमतिसहित संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले विपक्षी गठबन्धनबीच भएको सहमतिलाई संस्थागतरुपमा स्वीकार गरेको छ । उनीहरुले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने नीति बनाइएको पाइन्छ ।
यस्तै, न्यायिक लडाइको तयारीका लागि शनिबार नै विपक्षी दलबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको छ । शुक्रबार काँग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसद साथमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यसका लागि उपत्यका बाहिर भएका विपक्षी सांसदलाई काठमाडौंमा आउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।
‘पोर्न, फिल्म काण्डमा अर्की अभिनेत्री मुछिइन्, राज कुन्द्रासँग थियो ५० प्रतिशतको डील
इजरायलमा एक हजार नेपालीलाई मासिक २ लाख तलब दिने गरी खुल्यो जागिर, सूचनासहित
राष्ट्रपति भएपछि सी चिनफिङ पहिलो पटक तिब्बतमा
अमेरिकी अरबपतिको अन्तरीक्ष उडान
नासाले अन्तरिक्ष स्टेशनको लागि अर्को इस्पेसकार्गो प्रक्षेपणबारे दियो यस्तो जानकारी
ओलम्पिकमा कोभिडबाट बच्न जापानले कस्तो जुक्ति निकाल्यो ?
झन् झन् शक्तिशाली बन्दैँ चीन
राष्ट्रपति निवासका सुरक्षा प्रमुख गिरफ्तार, यस्तो छ गम्भिर छ कारण, देशभर तरंग
अचानक परेको भिषण वर्षापछि ठुलो बाढी- १२० जनाको मृत्यु, सयौं बेपत्ता
भारतमा फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ,हेर्नुहोस कति छ ?